“Hazard ma ahan in lala bar-bardhigo Cristiano Ronaldo” – Laacib hore ee kooxda Real Madrid ah – Gool FM
“Hazard ma ahan in lala bar-bardhigo Cristiano Ronaldo” – Laacib hore ee kooxda Real Madrid ah
Dajiye July 19, 2019
(Madrid) 19 Luulyo 2019. Ciyaaryahankii hore kooxda Real Madrid ee Aitor Karanka ayaa wuxuu xaqiijiyay inaan lala barbardhigi karin xiddiga cusub ee Eden Hazard halyeeyga Los Blancos ee reer Portugal Cristiano Ronaldo.
Aitor Karanka ayaa amaanay 28 jirkan heerka caalami ee dalka Belgian Eden Hazard, isagoo xaqiijiyay inuu sameyn doono waxa ay doonayaan taageerayaasha Real Madrid, sababa la xiriira inuu yahay ciyaaryahan weyn oo awood u leh inuu isbedel ku sameeyo Loos Blancos.
Eden Hazard ayaa ugu dambeyntii ku guuleystay inuu ka dhabeeyo riyadiisa, kaddib markii uu suuqan xagaaga u wareegay kooxda Real Madrid, wuxuuna kaga soo wareegay Chelsea qiimo dhan 100 milyan oo euros.
Hadaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu soo xigtay wareysi uu bixiyay laacibkii hore kooxda Real Madrid ee Aitor Karanka waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Eden Hazard waa ciyaaryahan koox kasta ka sameyn kara farqi, balse waa inaan ka taxadirnaa inaan la barbar dhigno xidiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo, sababtoo ah Ronaldo waa mid gaar ah, cadaadiska Hazard ma ahan mid faa’iido leh”.
“Hazard wuxuu wax weyn ka qabtay kooxda Chelsea iyo guud ahaan kubadda cagta Ingariiska, tayada ciyaaryahanka reer Belgium ayaa sidoo kale farqi ka sameyn doonta Real Madrid iyo horyaalka La Liga ee dalka Spain”.
Zidane oo ka hadlay heshiisyada cusub ay sameysay Real Madrid, isagoo dhinaca kale amaanay Diego Simeone
Xulka Algeria oo markoodii labaad ku guuleystay koobka qarammada qaaradda Afrika kaddib markii ay caawa garaaceen Senegal